डाक्टर माहाथिर, इमरान खान र प्रधानमन्त्री ओली !| Nepal Pati
बिगत केही दिन देखी समाजिक सञ्जालमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको चर्चा अकस्मात छाएको छ । क्रिकेट , बिबाह र राजनीतिलाई भरपुर उपयोग र प्रयोग गरेका इमरान , नयाँ पाकिस्तान निर्माणको चरण सम्म पुग्दै गर्दा खेलको राजनीति र राजनीतिको खेल मैदानमा जम्दै छन । क्रिकेटको मैदान होस कि राजनैतिक खेलको मैदान , डल्ला फाल्न पाउने बित्तिकै चम्कने इमरान शैली जिबनभर समृद्धिको डल्ला फ्याक्नेहरुलाई नमिठो शिक्षा दिन तम्सिएको छ । मौका पाउना साथ मुलुकवासीको निम्ती सकारात्मक काम गर्न तम्सने डाक्टर माहाथिर र इमरान खानको सत्ता सञ्चालन शैली समृद्धिको महाअभियानमा लम्केको सिंहदरबारलाई कुरी कुरी गर्दैछ ।
डाक्टर माहाथिर मोहमद
९ मे २०१८ मा सम्पन्न ऐतिहासिक नतिजा सहितको निर्बाचनमा ९२ बर्षे डाक्टर माहाथिर मलेसियाको राजनीतिमा दोश्रो इनिङ्ग समाल्न आइपुगे । लगातार ७० बर्ष सकृय राजनीति र २२ बर्षे सत्ता राजनीति बिताउँदै रिटायर्ड जीवन बिताइरहेका उनी ९२ बर्षमा फेरी एकपटक युवा बन्न बाध्य बनाइए । आफैले हुर्काएको युनाइटेड मलायाज नेशनल अर्गनाइजेसनको बिरुद्ध राजनैतिक मोर्चा खोल्दै चुनाबी मैदानमा होमिए । सन १९९८ मा आफैले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्दै जेल पठाएका अनबर इब्राहिम सँग सत्ता साझेदारी गर्ने सर्तमा बिगतको आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका नजिब रजाकलाई पराजयको स्वाद चखाए ।
मलेसिया , पाकिस्तान र नेपाल संजोगले एसिया मै पर्दछन । मलेसियाको राजतन्त्र र आर्थिक हैसियत बाहेक तीनै मुलुकले अंगालेको संघीयता सहितको संसदिय राजनीति मात्र हैन अधिकांस समस्याहरु समान छन ।
सन १९८१ – २००३ सम्म मलेसियाको सत्ता समाल्दै मुलुक र मुलुकवासीको आर्थिक अवस्थामा आमुल परिवर्तन ल्याउने “फादर अफ मोर्डन मलेसिया ” डाक्टर महाथिर मुलुक भित्र फैलिएको बेथिती , बिसंगती र भ्रष्ट्राचारलाई ठिक पार्न ‘मलेसियन कृष्ण’को भूमिका निभाउँदै छन ।
निर्वाचन ताका जनतालाई दिलाईएको आश्वासन पुरा गर्न सुरु गरिएको संकेत स्वरुप मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमा मन्त्री र आफ्नो सेवा सुबिधामा भारी कटौती गरेका छन । देश भित्र रहेका तमाम वरिष्ट कर्मचारीलाई सरकारी खर्च कटौतीको निम्ती स्वयक्षिक अपिल गरे तर बाध्य पारेनन । उनी रोकिएनन । जनताको दैनिकीलाई सरल र सहज बनाउँन जिएसटी खारेज गरी दिए । मुलुकले थप बैदेशिक ॠण बेहोर्न नसक्ने स्थीतीलाई मध्य नजर गर्दै बिगतको सरकारले चीन सरकारसँग गरेको रेल लिन्क र इनर्जी पाइप लाईन ॠण सम्झौता रद्ध गर्न चीन सरकारलाई राजी गराए ।
पाकिस्तानी क्रिकेटबाट सन्यास लिंदै राजनीतिको खेल मैदानमा होमिएका इमरान खान २५ जुलाई २०१८ मा सम्पन्न निर्बाचन मार्फत पाकिस्तानको २२ औं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन । २५ अप्रिल १९९६ मा तहरीक – ए – इन्साफ पार्टी खोल्दै राजनैतिक मैदानमा सक्रिय उनी नयाँ पाकिस्तान निर्माण गर्ने स्थानमा पुगेका छन । चरम राजनीतिकरण , सरकारी निकायको भ्रष्टीकरण , राजनीतिको आडमा अकल्पनिय आर्थिक भ्रष्टाचार र आतंकबादले दिशाहिन र गन्तब्यहिन मुलुकलाई नयाँ राजनैतिक उर्जा भर्दै पाकिस्तानी जनताको मुक्तीदाता बन्न तम्सिएका छन ।
स्वास्थ्यको हिसाबले आफुसँग सुबिधाजनक समय छैन भन्ने कमरेड राती ११ बजे पछी किन स्वास्थ्य बिगारी बिगारी अनुपयुक्त भेटघाटमा समय ब्यतित गर्छ्न ? कसैले मुख खोल्दैनन ।
जनताको मनो भावनालाई नजिकबाट नियाल्दै परम्परागत सुबिधा भोगी राजनीतिलाई बहिस्कार गर्दा मुलुकको राजनीतिले नयाँ दिशा पक्डेको छ । बिशाल प्रधानमन्त्री निवास , सयौं कर्मचारी र दशौं बुलेटप्रुफ गाडीको मोहलाई घटाउँदै केवल तीन बेडरुम सहितको सानो घरमा दुई सेवक र दुई वटा कारको साथ नयाँ इनिङ सुरु गरेका छन । तमाम चुनौती र समस्यालाई चिर्दै मुलुकवासीको उच्च अपेक्षा पुरा गर्न दिन रात एक गर्दैछन ।
हरेक संस्थाको गतीबिधी पारदर्शी र जनताप्रती जबाफदेही बनाउने , भ्रष्टाचार प्रती शुन्य सहनशिलता अप्नाउने , राष्ट्रको फजुल खर्च कटौती गर्दै आर्थिक समृद्धी सहितको पाकिस्तान निर्माण गर्न कुनै कसर नराख्ने उदघोषले पाकिस्तानमा छिट्टै परिवर्तन देखिने छ । अबको ६ महिना भित्रमा हरेक क्षेत्रका प्रमुखहरुले एक भन्दा बढी कार्यदलको सिफारिशमा नयाँ गन्तब्य तय गर्नेछन । परिवर्तन आउँछ हैन परिवर्तन ल्याइनेछ भन्ने प्रधानमन्त्री इमरान आफ्नो पार्टी तहरीक – ए – इन्साफ, परिवर्तन चाहाने शक्ती , राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनतासँग हातेमालो गर्दै पाकिस्तानी राजनीतिलाई नयाँ युगमा प्रबेश गराउँदै छन । जसको सुरुवात भइसकेको छ ।
मलेसिया , पाकिस्तान र नेपाल संजोगले एसिया मै पर्दछन । मलेसियाको राजतन्त्र र आर्थिक हैसियत बाहेक तीनै मुलुकले अंगालेको संघीयता सहितको संसदिय राजनीति मात्र हैन अधिकांस समस्याहरु समान छन । परम्परागत शक्तीलाई निर्बाचनको माध्याम बाट चुनौती दिंदै मतपत्रबाट तीनै मुलुकको सत्ता परिवर्तन भएको छ । विकास , समृद्धी , सुशासन , भ्रष्टाचार रहित मुलुक निर्माण गर्ने नारालाई राम्रो मार्केटिङ गर्न सफल नेताहरु नयाँ सरकार निर्माण गर्दै काम सुरु गरीसकेका छन ।
मृत्युलाई नजिकबाट देखेका , मुलुकबाशीको दयनिय आर्थिक अवस्था वा दैनिकीलाई आफैले भोगेका , राजनैतिक आन्दोलनको क्रममा अत्यन्त पिडादायी घटनाहरु भोगेका , कठिन संघर्ष , कहाली लाग्दो १४ बर्षे जेलजीवन मात्र हैन लामो समय पार्टीमा प्रतीपक्षी राजनीति गर्न बिताएको समय , दुख र त्यागको पुरस्कार प्रधानमन्त्री ओलीले पाइसकेका छन । सिंहदरबारको कुर्सी प्राप्त गर्न बाध्यात्मक बनेको वाम गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा पुर्याउँदै मुलुकको सबैभन्दा शक्तीशाली बन्न सफल प्रधानमन्त्री ओली जनताको अपेक्षा पुरा गर्न अल्मलिएको महशुस सर्बत्र गरिदैछ । महाथिर , इमरान र ओलीले आफ्नो जीवनमा पाउन वा गुमाउन केही बाँकी छैन । केही पक्कै हुन्छ र गरिने छ भन्ने संकेत महाथिर र इमरानले आफ्नै खर्च कटौतीबाट सुरु गरे । सत्ता समालेको ६ महिना पुग्दा पनि कमरेड ओलीले नयाँपन दिन चाहेनन वा सकेनन ।
माहाथिर आधुनिक मलेसियाका पिता मानिन्छ्न । इमरान पाकिस्तानी क्रिकेटको पिता बन्दै राजनीतिमा सुशासन भित्र्याउँदै मोहम्मद अलि जिन्हा पछीको स्थान बनाउँन लागी पर्दैछन ।
आफ्नै मुर्छित सपनालाई मुलुकवासीको सपना बनाउन दिनको १८ घण्टा खटी रहेका प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको पृथ्बी नारायण साह बन्न मरीहत्ते गर्दैछन । सुशासन , विकास , स्थीरता , भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलता र समृद्धी ल्याउन मरिहत्ते गर्दा वालुवाटारमा उठाइएको नसुहाउँदो पानीको बिल थाहानै पाउँदैनन । स्वास्थ्यको हिसाबले आफुसँग सुबिधाजनक समय छैन भन्ने कमरेड राती ११ बजे पछी किन स्वास्थ्य बिगारी बिगारी अनुपयुक्त भेटघाटमा समय ब्यतित गर्छ्न ? कसैले मुख खोल्दैनन । कोठामा भेट हुँदा वा दुई जना बैठक बस्दा नेकपा डुब्ने भयो भन्ने तर औपचारिक ठाउँमा बोल्न डराउने अन्य कमरेडहरु पालो कुरेर बस्ने काइदा झनै उदेकलाग्दो बन्दैछ ।
अत्यधिक सपना बाँडदै सफलताको शिखर चुमेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले सम्म तीनै सपनाहरुको ‘डिपीआर ‘ बनाउँन तयार भएका छैनन । समृद्धिको दौड सुरु गर्न ‘ रेडी टु गो ‘ को अवस्थामा कुनै पनि महत्वकाँक्षी आयोजना र योजनाको खाका समेत मनमै रहेको अप्रिय अवस्थामा उनीबाट हुँदै गरेको भाषणबाजी निकट भबिष्यमा आफै तिर फर्कने बुझ्नै चाहादैनन । झण्डै दुई तिहाईको समर्थनले खोजेको दुई तिहाईकै विकास र समृद्धिको निम्ती करीब ६ महिनामा कहीकतै छलफल समेत भएको सुनिएको छैन । देश भित्रका सबैखाले राजनैतिक शक्ती , प्रमुख प्रतिपक्षी दल , पार्टी भित्रको विभिन्न बिभागीय प्रमुख र बिभिन्न क्षेत्रका बिद्ध्वत बर्ग , नागरिक समाज र आफ्नै मन्त्री परिषद सदस्यसँग सघन छलफल , अन्तरक्रिया गर्दै मुलुकमा नयाँपन दिन चुकी रहेका छन ।
गरीब जनतालाई श्रोत र साधन मात्र देख्ने प्रधानमन्त्रीको सोचले व्यापार र जिबिका छुट्ट्याउँन नसक्ने दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था , पार्टी र मुलुकको राजनीति भ्वाङ्ग पार्ने कारण बन्दैछ ।
अपबादमा बाहेक राजनीतिमा पटक पटक अबसर प्राप्त नहुने कुरा राम्रोसँग बुझेका प्रधानमन्त्री ओली कार्यक्रममा ढिला जाने , धेरै बोल्ने , सबै क्षेत्रको ज्ञाता बन्दै उपदेश दिने , अत्यन्त लामो र ठट्यौली मिश्रीत शब्दहरुलाई तास फिटे झैं फिटनमा अमुल्य समय नष्ट गर्ने , हरेक घटना र बिषय वस्तुमा आफै जवाफ दिन तम्सने , पार्टीको शक्ती आफ्नो हातमा नआउँदा सम्म सहयोग हैन सहकार्य चाहाने उनी शक्तीशाली अध्यक्ष बने सँगै सहकार्य हैन सहयोग माग्ने कार्यशैलीले नेकपाको पार्टी संगठन र राजनीति पेटभरी खाएर पानीमा बसेको भैंसी जस्तो बनीरहेको लाखौं कार्यकर्ता र हजारौं नेताहरु टुलुटुलु हेर्दै छन ।
जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन नआएको वर्तमान अवस्थामा ‘कर आतंक’ लाई बाध्यात्मक देखाउन आफैले गोरुगाडा कर तिरेको प्रसंग कोट्याउँने उनको शैली गरीबको नजरमा किल बन्दैछ । केवल आफ्नाले राम्रो भन्ने जनताले नराम्रो देख्ने स्थीतीबाट गुज्रदै गरेको बर्तमान सरकार हजार जनावर पाले पनि कर नलाग्ने तर बिक्री गर्दा कर लाग्ने सिद्धान्तलाई जथाभाबी फिट गर्दैछ ।
करोडौंको कारोबार गर्नेलाई कर छुट दिने तर सामान्य जनताको चरो मुसोमा कर ठोक्ने स्थानिय नीतिलाई जायज मान्दैछ । राज्यभित्र मौजुद प्राकृतिक साधन र श्रोतको अधिकतम दोहन गर्दै पुँजी निर्माण गर्नुको सट्टा केवल गरीब जनतालाई श्रोत र साधन मात्र देख्ने प्रधानमन्त्रीको सोचले व्यापार र जिबिका छुट्ट्याउँन नसक्ने दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था , पार्टी र मुलुकको राजनीति भ्वाङ्ग पार्ने कारण बन्दैछ । फलस्वरुप प्रधानमन्त्री ओली नेपालको डाक्टर माहाथिर र इमरान बन्ने अबसर गुमाउँदै छन ।